पर्यटकमात्र कोरोनाका कारण हुन् ?
विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल आगमन खुला भएकमो छ । यो हामी पर्यटन व्यवसायीका लागि खुशीको कुरा हो तर यसले कोरोना फैलाउन सक्ने भन्दै धेरै जना आशंकित पनि देखिएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणको भयावहलाई हेर्दा पर्यटन आउन डराउन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपालका केही पर्यटन प्रडक्ट र क्षेत्रमा कोरोना पैmलने सम्भावना कम देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण र सन्त्रासकै बीच विदेशी पर्यटक आगमन खुला भएको हो । पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकलाई खुला गर्नेगरी अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, पदयात्रा र पर्वतारोहण मात्र होइन, अन्य पर्यटकीय गतिविधि पनि खुला गरेर विदेशी पर्यटक आगमनलाई सहज बनाइनुपर्छ ।
नेपाल आउने पर्यटकले ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति बराबरको बीमा गरिएको कागजातसमेत अनिवार्य गरिएको छ भने पदयात्रा वा पर्वतारोही दलले आरोहण अनुमति लिनुपूर्व नेपालबाट साथमा जाने सदस्यको कम्तीमा १ लाख रूपैयाँको कोरोनासम्बन्धी बिमाको कागजात अनिवार्य ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड व्यावहारिक देखिँदैन । नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ भने नेपाल आइसकेपछि अनिवार्य ७ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र हिँडडुल गर्न नपाइने मापदण्ड मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । यो विदेशी पर्यटक आगमनका लागि अव्यावहारिक र अनावश्यक शर्त हो । पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकका लागि यस्तो अनावश्यक र अव्यावहारिक शर्त राख्नु भनेको सकेसम्म नआऊ भन्नु नै हो । ढोकामा ताल्चा लगाएर स्वागतम्को ब्यानर राख्नुजस्तै हो । कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोमामा पुगेको छ । व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय छाड्नु र बोक्नु भइसकेको छ । ऋणको ब्याज बढ्दो छ, कर्मचारीको तलब दिन सकिएको छैन । तर, घरभाडा आदि सञ्चालन खर्च रोकिएको छैन । यस्तोमा थोरै पर्यटक आइदिए पनि राहत मिल्छ । तर, विदेशी पर्यटक आगमनका लागि सरकारले तयार पारेको मापदण्ड नै पर्यटनका लागि बाधक बन्ने देखिन्छ ।
कोरोना त्रासकै बीचमा पनि पर्यटकहरू भ्रमणका लागि आउन चाहेका देखिन्छन् । तर, सरकारी नीतिको अव्यावहारिक शर्तका कारण पर्यटकलाई पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जान उत्साहित नगर्ने देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पीसीआर मेशिन राखेर परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई सतर्कताका साथ भीडभाड कम हुने खालका पर्यटन गतिविधि गर्न दिनुपर्छ । उनीहरू आफै पनि सचेत हुने हुँदा पर्यटन व्यवसायीले उचित मापदण्ड पालना गरेको खण्डमा कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना पनि कम हुन्छ । कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सहज हुने गरी पर्यटकले घुम्न पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ । विदेशी पर्यटकबाट नेपाल भ्रमणका लागि उल्लेख्य रूपमा माग आए पनि सरकारले तयार पारेको मापदण्डका कारण सोधपुछबाहेक बुकिङ गर्न पर्यटक हतोत्साहित भएको देखिँदैन ।
हो, नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै छ । यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ, पर्यटक आगमन ठप्प पारेर अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर पनि कोरोना महामारी फैलन रोक्न सकिएन । पर्यटकले नै कोरोना ल्याउने जस्तो सोच अझै पाइन्छ । पर्यटक नै कोरोनाको स्रोत मान्ने हो भने त नेपालमा कोरोना यस्तो भयवाह नहुनु पर्ने हो । तर, पर्यटकबाट कोरोना फैलिएको छैन । नेपालमा बसिरहेका कतिपय पर्यटकले त नेपालमा अझै पनि सुरक्षित अनुभव गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले पर्यटकले कोरोना ल्याउँछन् भन्ने सोच नै बदलिनु पर्ने देखिन्छ ।
जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा कोरोना भयावह देखिन्छ । जनसंख्या र आकारका हिसाबले मध्यम श्रेणीमा परे पनि कोरोनाका हिसाबले नेपाल अति प्रभावित ३५ मुलुकभित्र परेको छ । अर्थात्, पर्यटक ठप्प बनाए पनि कोरोना फैलिएको छ । पर्यटक आगमन रोक्नुको अर्थ कोरोनाको स्रोत रोक्नु पक्कै होइन भन्ने देखिएको छ । अब नेपालमा समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । यस्तोमा विदेशबाट पर्यटकलाई सुरक्षा सतर्कता उनीहरूले नेपालीलाई सार्ने सम्भावना कम देखिन्छ । बरु, उनीहरूलाई संक्रमण नसार्न हामी व्यवसायी बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । पर्यटक आगमन रोक्नुको कारण अहिले देखिँदैन । हो, जतिबेला नेपालमा कोरोना देखिन थालेको थिएन, त्यतिबेला पर्यटकबाट आउन सक्ने सम्भावना थियो । त्यो रोक्न जरुरी पनि थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । त्यसैले पर्यटकलाई रोक्नु तर्क र व्यावहारिकता दुवैले उपयुक्त देखिएको छैन । कुनै पनि निर्णय गर्दा लाभहानिको तुलना हुन्छ । पर्यटक आएर कोरोना सार्ने र त्यसबाट हुने क्षतिको खासै देखिँदैन । तर, दाँजोमा अर्थतन्त्रलाई दिने फाइदा बढी हुन्छ । व्यवसाय बन्द गर्नुपर्दा धेरै लगानीकर्ताको हालत दयनीय बनिसकेको छ । त्यहाँ काम गर्ने कामदारको अवस्था झनै दयनीय छ । यो अवस्थालाई सुधार्न पर्यटक आगमन खुला गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा कोरोना ल्याउने भनेकै पर्यटक हुन् भनेजस्तो सोचाइ सरकारी नीतिनिर्माता र आममानिसमा समेत छ । संक्रमित व्यक्ति पर्यटक बनेर आउने सम्भावना देखिँदैन । तैपनि कथंकदाचित् बीचैमा संक्रमति हुन सक्लान् भन्ने मानेर विमानस्थलमा परीक्षण गर्ने र केही शर्तहरूसहित घुम्न दिने गर्दा कोरोना फैलिने देखिँदैन ।
पर्यटकलाई जथाभावी एक्लेदुक्लै हिँडडुल गर्न र धेरैसँग संसर्ग गर्न दिनचाहिँ हुुँदैन । जुन ठाउँका लागि जे पर्यटन प्रडक्टका लागि आएका हुने त्यो ठाउँमा जाएर घुम्दा कोरोना कसरी फैलन्छ ? कोरोना फैलनुमा नेपालीहरूको लापर्बाही र सरकारको काम गर्ने ढंग नपुग्नु कारण देखिन्छ । यदि नागरिकहरू सतर्क भएर काम गर्ने र सरकारले पनि जिम्मेवार भए सही ढंगले कोरोनालाई नियन्त्रण लिन प्रयास गर्ने हो भने पर्यटक आगमनले केही पनि असर गर्दैन । यसलाई सबैको ध्यान जानुपर्छ ।